Azerbaijan ayaa ah guul weyn oo laga gaadhay warshadaha duulista
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Azerbaijan ayaa ah guul weyn oo laga gaadhay warshadaha duulista
Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Heydar Aliyev ee magaalada Baku waxaa isticmaali jiray 1.57 milyan oo rakaab ah laga bilaabo Janaayo ilaa May waana garoonka ugu weyn Azerbaijan. Tirada guud ee rakaabka ay ka shaqeeyaan dhamaan garoomada diyaaradaha ee Azerbaijan waa 1.85 milyan inta lagu guda jiro shanta bilood ee ugu horeysa 2019.
Shir Madaxeedka Hawada Adduunka iyo Shirka Sannadlaha ah ee Ururka Duulista Rayidka ee Adeegyada Hawada Cirka (CANSO) oo lagu qabtay Geneva toddobaadkan waxay guul weyn u tahay calanka Azerbaijan, calanka Azerbaijan.
Wafdi ka socda shirkadda, oo si fudud loogu yaqaanno "AZAL," oo uu madax u yahay Farkhan Guliyev, oo ah agaasimaha shirkadda adeegga duulista hawada ee qaranka ee Azeraeronavigation, ayaa soo bandhigay fiidiyoow xayeysiis ah oo muujinaya guulaha AZAL iyo qorshayaasheeda mustaqbalka, in ka badan 300 xirfadlayaasha duulista ayaa jooga.
"Azerbaijan waxay door muhiim ah ka leedahay fududeynta isu socodka caalamiga ah iyo tan gobolka waxayna xiriir adag la leedahay dawlado iyo ururo badan oo adduunka ah," ayuu yiri agaasimaha guud ee CANSO Simon Hocquard AZAL sida loo sheegay magaalada Geneva Arbacadii ka dib markii la daawaday fiidiyowga.
"Sidan oo kale waxay noqoneysaa goob aad u wanaagsan munaasabadeena xubinimada soo socota, waxaana rajeynayaa inaan idinku soo dhoweeyo halkaas sannadka 2020 si aan ugu kuurgalo waxa ugu dambeeya ee [maareynta taraafikada hawada]."
Shir Madaxeedka Hawada Adduunka iyo CANSO waxaa la qabtay Juun 17-19. CANSO sanadka soo socda - oo ah madal maareynta taraafikada hawada adduunka oo loo arko inay tahay dhacdo weyn oo ka dhacda warshadaha duulista sanad walba - waxaa lagu qaban doonaa Baku laga bilaabo Juun 8-12, 2020.
Gaadiidka hawada ee Azerbaijan waxaa maamula Azeraeronavigation, oo si fudud loogu yaqaan AZANS. Hay'addu waxay ugu dambayntii mas'uul ka tahay nabadgelyada dhammaan duulimaadyada ka dhex socda hawada Azerbaijan, oo dhererkeedu yahay 165,400 kiiloomitir oo iskuweer ah (63,861 mayl laba jibaaran) oo ka mid ah aagga koonfurta Caucasus iyo cidhifyada galbeed ee Badda Caspian, oo fadhiya isgoyska Bartamaha Aasiya iyo Bariga Yurub.
AZANS hadda waxay u adeegtaa 150,000 duulimaad sanadkii, 95,000 ka mid ah waa duulimaadyo transit mara hawada Azerbaijani. Laga soo bilaabo 2002, taraafikada hawada ee Azerbaijan ayaa kordhay in ka badan 200 boqolkiiba, sida lagu sheegay xogta ay sii deysay AZAL ee 2018.